बैंकहरुले बढाए ब्याजदर, हे’र्नुहोस् कसको कति ? – Sadhaiko Khabar
बैंकहरुले बढाए ब्याजदर, हे’र्नुहोस् कसको कति ?
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, आश्विन ०१, २०७८ समय: २०:५४:११
काठमाडौं / को’रोना संक्र’मणको प्रभाव घटेसँगै बजारमा लगानीयोग्य रकमको अभाव देखिन थालेपछि बैंकहरूले ब्याजदर बढाएका छन् । आजदेखि लागू हुनेगरी अधिकांश बैंकले ब्याजदर वृद्धि गरेका हुन् ।
राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्कानुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले चालु आर्थिक वर्षको बिहीबारसम्म रु तीन खर्ब ५२ अर्ब २९ करोड एसएलएफमार्फत उठाएको देखिन्छ । राष्ट्र बैंकले गत भदौ १७ मा सात दिनका अवधिको रु २० अर्ब, भदौ २४ मा १४ दिन अवधिको रु ३० अर्ब र भदौ ३१ मा रु २० अर्ब बराबरको रिपोसमेत जारी गरिसकेको छ । इ’ताजा ख’बरबाट ।